Tababare Jurgen Klopp Oo Faah Faahin Buuxda Ka Bixiyay Xaaladaha Naby Keita & Roberto Firmino Ee Ka Hor Finalka UCL. - Gool24.Net
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka warbixiyay xaalada dhaawacyadii Naby Keita iyo Roberto Firmino.
Liverpool ayaa isku diyaarinaysa finalka UEFA Champions League ee ay Tottenham kula ciyaari doonto magaalada Madrid iyada oo Naby Keita iyo Roberto Firmino ay dagaal wayn ku jiraan.
Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Naby Keita uu ka soo hormarayo jadwalkii markii hore la filayay in uu ku soo laabanayo laakiin waxa uu ka taxadaray in uu cadeeyo in Keita uu ciyaari doono finalka Champions league.
Jurgen Klopp oo ka hadlaya xaalada Naby Keita ayaa yidhi: “Naby waxaan sheegi karaa in uu ka soo yara horeeyo jadalka laakiin taasi waxma ulama micno aha finalka”.
“Hadda orod toos ah iyo wax walba wuu samaynayaa, waxa uu raaxo ku dareemay boqolkiiba 50% xooganaanta iyo waxyaabahan, laakiin wali dariiq la marayo aya hadhsan” ayuu Klopp hadaliisa raaciyay.
Klopp oo ka hadlaya murankii xulka Naby Keita ee Guinea dhex maray ayaa yidhi: “Anigu waan ogahay dhibaatada Guinea iyo waxa sidaas oo kale ah, anagu ma doonayno in aanu sii haysano ciyaartoy maqan, haddii uu ciyaari karo waxaa laga yaabaa in ay ka fikirayan sidan oo kale, laakiin sidan oo kale ma aha”.
“Aniga ahaan, haddii aan boqolkiiba boqol daacad noqdo, way fiicnan kartaa haddii uu Naby boqolkiiba boqol taam noqdo oo uu ciyaari karo koobka qaramada Afrika ee Africa Cup of Nations” ayuu Klopp hadalkiisa ku sii xoojiyay.
Klopp oo Keita ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Laakiin anagu ma ogin, waanu arki doonaa, waxaanu u baahanahay in aanu wada jir ula shaqayno waaxdooda caafimaadka, sababtoo ah dhamaadka ciyaartoyga taamka ah ayaa aniga aragtidayda ciyaari kara, waajib ayay ku tahay in uu dalkiisa u ciyaaro”.
” Haddii aanu boqolkiiba boqol taam ahayn isagu ma ciyaari karo, taasi waa sida ay tahay, muhiim ma aha haddii aad kooxdaada ama wadankaaga u ciyaarto, taasi waa waxa aanu isku dayno in aanu hubino”.
“Wanaag ayay u muuqataa, aad ayay u fiican tahay, isla markaana waxaanu eegi doonaa haddii ay fursadi jiri doonto” ayuu Klopp sharaxaadiisa dheer raaciyay.
Intaas kadib Klopp ayaa ka hadlay xaalada Firmino wuxuuna yidhi: “Bobby xaqiiqdii waxa uu u muuqdaa in uu fiican yahay, hadda waxa uu qayb ka yahay tababarka. Waqti dheer muu maqnayn, laakiin dabcan wali waanu ka taxadaraynaa, waxaananu doonaynaa in aanu hubino in ayna waxba dhicin”.
“Wali dhawr maalmood ayaanu haysanaa, waxaananu doonaynaa in aanu adeegsano iyaga, taasi waa sababta uu u soo labatay, u maqnaa, u soo laabtay, . Shalay kaftan ahaan oo kaliya ayuu u ciyaarayay , laakiin isaga ayay u fiican tahay, talaabadii ugu horaysay ee ah in uu markale ciyaaro”.
“Maanta waxa uu isagu tababarka ku ahaa ilaa boqolkiiba 70%, ugu dhawaan barri wuu dhamaysan doonaa, waanu arki doonaa, kadib waxaan ku rajo waynahay in uu fiicnaan doono” ayuu Klopp hadalkiisa ku soo xidhay.
Sida ka muuqata hadalka Jurgen Klopp waxaa la filayaa in Roberto Firmino uu boqolkiiba boqol taam u noqon doono finalka Champions league ee Tottenham basle ayna sahlanayn in Naby Keita uu taam buuxda noqon doono.